Doorwin သည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလူမီနီယံပြတင်းပေါက်များတွင်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တာရှည်ခံစွမ်းအင်ထိရောက်ပြီးလှပသောကုန်ပစ္စည်းများကိုဘတ်ဂျက်အားလုံးသို့လက်လှမ်းမီစေရန်ကြိုးစားသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးစီမံကိန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းသည်။
Profiles များ 6063-T5 အရည်အသွေးမြင့်အပူချိုးလူမီနီယံ profile များကို
6063-T5 အရည်အသွေးမြင့် Non- အပူချိုးလူမီနီယံ profile များကို
PVC / UPVC profile များကို
ဖန်ခွက် နှစ်ဆ tempered glaze:5+ 12A + 5mm;6+ 12A + 6mm; ...
တစ်ခုတည်း tenpered glaze: 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; ...
Laminated glaze: 8.76; 10.76; ...
FOEN J90 အလူမီနီယမ်စနစ်တံခါးတံခါးသည်အဆောက်အအုံအတွက်ပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ရော်ဘာသုံးချောင်းများကိုတံဆိပ်ခတ်ထားပြီးအလယ်ရော်ဘာချောင်းများသည်မိုးရွာသောကုလားကာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝကစားသည်။ သို့မှသာထုတ်ကုန်သည်လေနှင့်ရေဒဏ်ခံနိုင်မှုမြင့်မားသည်။ bearing သည်ကြီးမားသော partition ဖွင့်ခြင်းကိုနားလည်နိုင်ပြီးဆောက်လုပ်ရေး partition အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်တွင် frame frame ပန်ကာများဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်အဆောက်အ ဦး ၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုရိုးရှင်းပြီးလှပပြီးအလယ်အလတ်နှင့် high-end စီမံကိန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
၂။ ဖန်ခွက် - အမြင့်ဆုံးဖန်ခွက်အထူသည် ၂၅ မီလီမီတာဖြစ်သည်
3. ဟာ့ဒ်ဝဲ slot က: အထူး slot က
၁။ သံလိုက်စုပ်ယူနိုင်သောသော့ခတ်ကိုယ်ထည်သည်ကားသော့ခတ် EPDM တိတ်ဆိတ်သောရာဘာကြိုးတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်သော့ခတ်ခြင်းကိုပိုမိုချောမွေ့စေပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စေသည်။
၂။ ပိုမိုထူထပ်သောနံရံများသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်တံခါးများနှင့် ၀ င်းဒိုးများပျက်စီးခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
၃။ Damping ပတ္တာအားလက်ခံပြီး၊ 90 °အလိုအလျောက်နေရာချထားခြင်း <90 °အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းကိုအားနည်းသောကြမ်းခင်းစုတ်ယူခြင်းနေရာတွင်အစားထိုးသည်။
ဒီအဆင့်မြင့် ၀ ယ်သူတစ် ဦး ကိုသုံးပြီးသွားပြီဆိုလျှင်သင်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်ထိုက်တန်သည်။
FOEN J115 အလူမီနီယမ်စနစ်တံခါးတံခါးသည်အဆောက်အအုံအတွက်ပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ရော်ဘာသုံးချောင်းများကိုတံဆိပ်ခတ်။ အလယ်ရော်ဘာအစင်းသည်မိုးရွာသောကုလားကာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝကစားသည်။ သို့မှသာထုတ်ကုန်သည်လေနှင့်ရေစို့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စေသည်။ bearing သည်ကြီးမားသော partition ဖွင့်ခြင်းကိုနားလည်နိုင်ပြီးဆောက်လုပ်ရေး partition အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်တွင် frame frame ပန်ကာများဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်အဆောက်အ ဦး ၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုရိုးရှင်းပြီးလှပပြီးအလယ်အလတ်နှင့် high-end စီမံကိန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
insulator တွင်လည်းဘား: 14.8mm
၂။ ဖန်ခွက် - အမြင့်ဆုံးဖန်ခွက်အထူသည် ၃၉ မီလီမီတာဖြစ်သည်
3. ဟာ့ဒ်ဝဲ slot က: ဥရောပစံ C ကို slot က
နှစ်ဆ glaze အပြင်ပန်း
ရေတင်းကျပ်မှု - Class 6, GB / T7106-2008
Air ကိုတင်းကျပ်စွာ: Class 8, GB ကို / T7106-2008
လေဖိအားခုခံ: 4.6kPa, GB ကို / T7106-2008 လူတန်းစား 8
အသံကာကွယ်မှု: Rw (C; 35 (Ctr) = 2; - 5) dB, level3GB / T7106-2008
insulator တွင်လည်း: K = 2.7 (5 + 12Ar + 5low-E), GB / T8484-2008 အဆင့် 5
၃။ ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည်အရည်အသွေးမြင့် ၃၀၄ သံမဏိစိန်ကွက်ကိုခြင်ဆေးတိုက်ဖျက်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်။
၄။ စမတ်ချစ်ပ်သည်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ အသံနှင့်အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသဖြင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
၅။ built-in WIFI control module သည် networking ပြီးနောက် mobile APP ၏ remote control switch ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။
၇။ လျှပ်စစ်ပြောင်းခလုတ်ကို anti-pinch လက်ဖြင့်ပိုမိုလုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော။
၈။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်လျှင်ပုံမှန် switching လုပ်ရန် backup power နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
လုံးဝဥာဏ်ရည် ၀ င်းဒိုး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယံ ၀ င်းဒိုးစနစ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြုထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: 1.25 လူမီနီယမ် Tube စိတ်ကြိုက် extrusion